नेपालीले गरे साउदीमा ठूलो प्रदर्शन, कारण यस्तो छ ! (भिडियो हेर्नुहोस) – Namaste Dainik
नेपालीले गरे साउदीमा ठूलो प्रदर्शन, कारण यस्तो छ ! (भिडियो हेर्नुहोस)
September 8, 2020 NamastedainikLeaveaComment on नेपालीले गरे साउदीमा ठूलो प्रदर्शन, कारण यस्तो छ ! (भिडियो हेर्नुहोस)
कोरोना भाइ’रस रोकथाम र नियन्त्र’णको लागि सरकार’ले जारी गरेको लकडाउन र निषे’धाज्ञाको करिब ५ महिना पूरा हुन लागि सक्यो । जसका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रहेका धेरै नेपालीह’रुको रोजगारी नै गुमेको छ ।
स्वदेशमा रहेका नेपाली मात्र नभएर विदेश’लाई आफ्नो कर्म थलो बनाएर काम गरीर’हको नेपाली समेत त्यसको मारमा परेका छन् । विश्वको अर्थतन्त नै तहस’नहस हुने गरी सुरु भएको कोरोना माहा’मारीको बेला सरकारले दीर्घका’लीन योजना नल्या’उदा नेपालमा रहेको नेपाली मात्र नभइ विदेशमा रहेका नेपाली समेत आ’क्रोशित बनेका छन् ।
सरकारको कार्य’शैली गुनासो गर्दै साउदी अर’बमा रहेका नेपालीले सरकारको विरोध गर्दै विरोध प्रदर्शन नै गरेका छन् । रोजगारीको सिल’सिलामा सा’उदी अरेयिबा पुगेर पछिल्लो समय अलपत्र परेका नेपालीह’रुले सरकार वि’रुद्ध विदेशी भूमिबाट नै विरो’ध प्रदर्शन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजी’नामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेको यो भिडियो पछि’ल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै बनेको छ ।
प्रतिकुल अवस्थामा समेत आफ्ना ज’नता प्रति सर’कार उत्तरदायी न बनेको भन्दै उनीहरुले आ’क्रोश समेत व्यक्त गरेका थिए ।
साथै साउदी अरब’मा रहेको नेपाली दूतावा’सले आफुहरुको पीडा न बुझेको भन्दै दूतावास खारेजको समेत माग गरेका छन् । यो समस्या साउदी अरबको मात्र होइन, नेपालीहरु रोज’गारीको सिलसि’लामा पुगेको अधिकांश मुलु’कमा रहेको छ ।
एकातिर सरकारको चर्को मूल्यद’रको उद्धार नीति र अर्को तिर महिनौदेखि रोजगारी गुमेका नेपालीहरु विदेश’मा नै चरम अ’भाव भोगेर बस्नुपर्ने अव’स्था रहेको छ । – न्युज २४ नेपाल
यसकारण सोह्र श्राद्धमा एक घरमा श्राद्धको टीका लगाएको ब्राह्मणले अर्को घरमा टिका लगाउनुहुँदैन
पुलबाट डण्डा खोलामा हाम्फालेकी अधिकारीको यसरी भयो उद्धार
आन्तरिक/अन्तर्राष्ट्रिय उडान जेठ २ सम्म बन्द, लकडाउनबारे मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गर्दै
April 26, 2020 Namastedainik